‘थाहा पाई पाई मर्दैछु’ - Tourism Samachar
६ जेष्ठ २०७८, बिहीबार १०:११
ढोका बन्द थियो !
ढोकामा डक-डक भन्दै ‘गुड मर्निङ ड्याडी’ !
छोरी जेनिशा बाहिर ढोकामा उभिएर सोधिन,‘ड्याडी तपाईलाई कोरोना भाइरस लागेको हो ?
अब,कति दिनमा ठिक हुन्छ, ड्याडी ?
केही दिन पछि …..!
ढोका डक डकको आवाज आउँछ ‘ड्याडी तपाई ठिक हुनुहुन्छ ?’
उत्तर दिने कुनै वाक्य थिएन । मेरो आँखामा आँशुभन्दा अरु कुनै उत्तर थिएन ।
टेलिभिजनको पर्दाहरुमा कोरोनाबाट मृत्यु भएको खबर र कारुणिक दृश्य देखिन्थ्यो । भावुक मान्छेहरुलाई यतिकै यस दृश्यल भयभित बनाउँछ ।
साँझको समय थियो । कोरोनाको ताप, चाप र अफिसियल प्रेसर उस्तै थियो । त्यो दिन (३० अप्रिल) अमेरिकन र युरोपियनहरु ग्रुप सगरमाथा वेस क्याम आउने जाने क्रम चलिरहेको थियो । कोरोना महामारीबीचमा ‘भीआइपि’ ग्रुपलाई व्यवस्थापन गर्नु उतिकै चुनौति थियो ।
सामाजिक सञ्जाल, सञ्चारमाध्यम सुन्दा र हेर्दा मानसिक रुपमा त्रसित थियो । कतै, कोरोना संक्रमित भइहालिन्छ की । मनभित्र एक किसिमको त्रास फैलिएको थियो । तर म मा कोरोना भाइरस फैलिएको थिएन । कामको प्रेसरले विदेशी पाहुनाको व्यवस्थापन र मौषम उस्तै विग्रिएको थियो । काठमाडौंमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको दर र संक्रमित संख्याको ग्राफ उकालो थियो ।
सरकारले केहिदिनअघि मात्रै तामझामका साथ धरहरा उद्घाटन गरेको थियो । मलाई लाग्थ्यो फेरी लक डाउन हुँदैन । तर, भयो ।
त्यही सरकारले अचानक आपतकालिन लक डाउनको घोषणा गर्यो । यसपछि लयमा तंग्रिदै गरिएको पर्यटन उद्योग भुकम्पले भत्किएको धराहराझै भयो ।
व्यवसायीहरु आँतिए !
अन्तराष्ट्रिय उडान पनि बन्द गर्ने निश्चित भयो ।
विदेशी पर्यटक हिमाल पुगेका छन् ।
कुनै ग्रुप भोलि वेस क्याम्प पुग्दै छ ।
तर, भोलीबाट लक डाउन छ !
कोही सगरमाथा वेस क्याममा रमाइरहेका छन् ! तर, समयले ठिक, उल्टो सन्देश दियो ।
यस्तो अवस्थामा मैले मेरो भिआइपी ग्रुपलाई काठमाडौं झिकाउनु थियो । ‘चाहे हिडेर होस या हेलिकप्टरमा’ । असामान्य परिस्थितिमा मैले लामो समय पर्यटन उद्योगमा रहेको अनुभव प्रस्तुत गर्ने समय थियो । यस्तो अवस्थामा कसरी कुशल व्यवस्थापन र पर्यटन इन्टरप्रेनर भन्ने तथ्य सावित गर्नु थियो ।
यद्यपी आत्माविश्वासका साथ काम गरेँ !
‘काठमाडौंमा लक डाउन हुँदै छ’ भन्ने न्युज सगरमाथा वेस क्याम्प पुगेका विदेशीले थाहा पाइसकेका थिए ।
यसपछि उनीहरु आँतिन्नु स्वभाविक थियो ।
उनीहरु जुन इच्छा र चाहानाले वेस क्याम पुग्दै थियो ।
तर, हेर्ने पर्ने दृश्य हेर्न पाएन ।
एडभेन्चर टुरिजमका लागि एभरेस्ट बेस क्याम्प पुगेका विदेशीलाई काठमाडौं ल्याउनु थियो । कुनै ग्रुप जाँदै थियो । कुनै ग्रुप बीचबाटोमा, कुनै ग्रुप फर्किने तयारीमा थियो । भौगलिक रुपमा त्रिकोणात्मक रुपमा रहेका ‘भिआइपी’ ग्रुपलाई आपतकालिन उद्धार गर्नु शब्द भनेजस्तो त्यति सहज थिएन । यसपछि मानसिक रुपमा ‘प्रेसर’ भयो ।
तत्काल हेलि पाउन सहज थिएन । हेलि पाइहाल्यो भने पनि मौषमले च्यालेन्ज गरिरहेको थियो । यत्ता सरकारको लक डाउन । सामान्यतया अकल्पनीय परिस्थिति बन्यो ।
व्यवसायी हुँ । यस्तै सयम हो आफूलाई परिक्षण र सफलता दिने । ठमेलमा बसेर कफिसँगै गफिने भन्दा आपतकालिन समयमा आफुलाई सफल व्यवसायीको पहिचान दिने समय आएको महशुस भयो ।
भोलिबाट हवाइसेवा बन्द हुन्दैछ ।
यस्तो अवस्थामा विदेशी पाहुना बीचबाटोमा छ ।
यता मौषम सफा छैन ।
एयरलायन्स बन्द छ ।
मेरो टिमका लिडरहरुले विदेशी पाहुनालाई व्रिफिङ सहित रातैभरी हिडाएर ल्याउनुको विकल्प थिएन । मानसिक तनाव भएपनि नभएझै भोक, प्यास, आराम नभनि ग्रुप उद्धारमा लागेँ । विहान ६ बजेदेखि रातको ११ बजेसम्म हेलि,ग्रुपको फ्यामेली र टिमका लिडरहरुसँग कमिनिकेशनमा व्यस्त भए ।
सरोजसँग विदेशी पाहुनाहरु सहित याक एण्ड यति होटलमा ग्रुप फोटो
एकदमै व्यस्त भइयो । म्यारियट होटल र याक एण्ड यति होटलमा धेरै समय रहें । जबकी गेष्ट काठमाडौं नआइपुगेझेलसम्म मनोत्रास थियो । कामको चापले खाना, बस्न, आराम र सुत्नको वास्ता गरिएन । निरन्तर ५ दिनसम्म ‘कमिनिकेशन टु कमिनिकेशन’ गर्नुको विकल्प थिएन । म विहानै घरबाट निस्किए । काठमाडौंमा घाम र पानी भइरहेको थियो ।
खोकि लागि रहेको थियो । घाटि दुखि रहेको थियो । मैले खासै वास्त गरिएन ।यही समय म कम्जोर भइसकेको रहेछु ।
मेरो परिवार भन्नु नै ‘घर परिवार, मेरो टिम र विदेशी पाहुना हुन् । उनीहरुलाई खुसि राख्न सक्नु नै मेरो वास्तविक सफलता हो ।’
मैले जसरी पनि ग्रुप काठमाडौं ल्याउनु थियो । तीन दिनको बाटो एकैदिन हिडेको मेरो टिमको प्रशंसा गर्छु ।
जब मेरो ग्रुप काठमाडौं आइपुग्यो । विदेशी पाहुना काठमाडौ आइपुगेपनि मनमा शान्ति थिएन । किनकी पाहुनाको पिसिआरमा झन्झट थियो । स्वास्थ्यमा असर थियो । नयाँ फ्लाइटको लागि कुनै टिकट थिएन । सम्भव भएकाहरु आफ्नो देश पुगिसकेका छन् भने अझै केही पाहुना काठमाडौंमा बसिरहेका छन् । सम्भवत चार्टर फ्लाइटमा उड्ने तयारी गरिरहेका छन् ।
कामको चापले रुघा खोकि हुँदा पनि स्वास्थ्यको ख्याल गर्न सकिएन । शरिर कम्जोर हुँदै गएको रहेछ । त्यही समय कोरोना संक्रमित भएको रहेछु । त्यो कुरापछि थाहा भयो । जबकी विदेशीहरु लगभग सबै संक्रमित भइसकेका थिए ।
मेरो स्वरमा समस्या आइसकेको थियो । यसपछि सधै बस्ने लबिको सोफामा समेत मलाई ‘अन कन्फरटेवल फिल’ भयो ।
म सधै एउटै कुरामा फोकस गर्छु,‘काम’ । मेरो सिद्धान्त नै काम हो । काम गर्नु नै धर्म र कर्म हो । मेरो विश्वास र सफलता पनि हो । मैले गर्ने कर्मले मलाई यहाँसम्म ल्याएको छ ।
यही मेरो मुख्य सिद्धान्त थियो । यसरी खटियो की अहिले सम्झदा पनि मनमा छुटै उर्जा आउँछ । यही समय स्वास्थ्यमा ख्याल गरिएन छ । र, कोरोनाले जित्दै गयो स्वास्थ्य कम्जोर हुँदै गएको महशुस भयो ।
‘पाँचदिन कष्टकर दैनिकी’
यति बेला म घरमा थिए । जबकी मसँग बोल्ने कुनै शब्द थिएन र बोल्न सक्ने क्षमता थिएन । सास कहाँबाट फेर्दै छु भन्ने नै महसुस गर्न सकिएन । स्वासप्रश्वासमा एकदमै समस्या भयो । मैले श्रीमती इमालाई सेयर गरिसकेको थिए । घरमा छोरी र श्रीमती छिन् ।
सामाजिक सञ्जालमा मन थाप्न नसकिने दृश्य र मृत्युको खबर मात्रै देखिन्थ्यो । तस्विर सहितको श्रद्धाञ्जली उस्तै थियो । यस्ता दृश्यले म पनि ……।
मनमा यस्तै कुराहरु खेल्न थाल्यो ।
एक तमासले हावा हुरी झै मृत्युको खबर फैलिए जस्तो । सामूहिक मुत्युको सूचना आए जस्तो । सामाजिक सञ्जालको पोष्टहरु हेरि नसक्नु र पढि नस्कनु थियो । जबकी संक्रमितलाई आत्माबल बढाउनेभन्दा पनि त्रसित बनाउने शब्दहरु छरपष्ट थियो । मृत्युको डरले मनभित्र दरबार बनाइ सकेको रहेछ । जबकी म आफ्नै घरको बेडमा पल्टि रहेको थिए ।
यसपछि आफैले आफैलाई मोटिभेट गरेँ । डक्टरको सल्लाह लिनु पर्छ भन्ने भयो । ग्राण्डिसम्म पुगेर डक्टरसँग सल्लाह गरेँ । परिवारमा छुटै बस्नु भन्ने शतर्कता दियो ।
यसपछि एकपटक बयोधा हस्पिटल जाने निधो गरियो । विहानै गएँ । डक्टरसँग लक्षणको विषयमा आवश्यक सबै परिक्षण गरियो । स्वाँब लिने, ब्लड टेष्ट, सिटि स्क्यान, सबै–सबै नै भयो । मेरो अवस्था देखेर डक्टर समेत आँतिए । त्यो बेला मेरो फोक्सोमा असर देखिसकेको थियो ।
‘जब फोक्सो सकिन्छ नी, म पनि सक्छु ।’
डरभित्रको मन र मन भित्र डरको घण्टि बज्यो ।
मेरो व्यवसायीक सम्बन्धका डक्टरहरुको हौसल्ला, माया, स्नेह र उर्जाले आवश्यक औषधि लिएर फर्किए । यसपछि आफैले आफैलाई भने,‘म मुटु भएको व्यक्ति हुँ । म निरोगी मान्छे हुँ । मैले कोरोनासँग जुधुेर जसरी पनि जित्नु पर्छ । यो जीवनको संग्रहित जीवन्त परिदृश्य हुने छ ।’
मनमनै ठूलो आनन्द मिल्थ्यो र ढाडस पुगेझै लाग्यो । घरि घरको झ्यालको पर्दा उघाथ्र्ये । अनि बाहिर हेरेर आफूलाई प्रकृति प्रेमि सम्झन्थ्ये ।
व्यवसायीक जीवनमा जोडिएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय डक्टरहरुसँग स्वास्थ्य स्थितिको विषयमा सुझाव लिए । यति बेला म होम आइसोलेसनमा छु ।
१०४ ज्वरोको पिडा
मलाई १०४ ज्वरो थियो । मनमा एकदमै नमिठो अनुभव भइह्यो । कम्जोर हुने नै भयो । कति गारो हुन्छ भन्ने शब्दमा व्याख्या गर्न सक्दिन । बाथरुम जानु पर्यो भने उभिनका लागि पहाडै चढे जस्तो गर्नु पथ्र्यो । खुटा एकदमै थर थर काम्ने भएको थिए ।
रातमा निन्द्रा थिएन । किनकी सास फेर्न गारो भएपछि निदाउने कसरी ? मलाई लाथ्यो, थाहा पाइ पाइ मर्दैछु । यसको लागि कुनै औषधि थिएन र छैन । ज्वरोको लागि प्यारा सिटामोल खानुको विकल्प थिएन । जबकी प्यारासिटामोलको डोज सकिएपछि भदौको बादलझै फेरी हुरुङरुङ ज्वरो बढेकै हुन्थ्यो ।
यसपछि मैले सबै फोनहरु बन्द गरे । खाना नरुच्ने । ज्वरोले गलाईरहने । सास फेर्न गारो हुने । यो लक्षण नै मेरो लागि कोरोना थियो । तर, जित्नु थियो । यस्तो समय आफै आत्माविश्वासको ज्वारभाटा लिएर उभिनुको कुनै विकल्प थिएन र छैन । यही आत्माविश्वास नै कोरोना जित्ने यस्तो ‘खास खुराक’ हो ।
कसरी भनौं र लेख्यौं । त्यो दिनहरु सम्झेर आउँदा कहाली लाग्छ । मुटुको धडकन अहिले पनि खल्बलाउँछ । कोरोनाको मध्यभाग अर्थात ५ देखि १० दिनको बीचमा एक दमै गारो भयो । यसअघि संगालेका आत्माविश्वासको तन्त्रहरु क्षिण भएझै लाग्थ्यो । र, पनि जित्नु छ भन्ने ढुकढुकीको स्पर्श हराएको थिएन ।
डक्टरको सेवा घरमा
राम्रो सबन्धका कारण अनुभवि डक्टरले घरमा आएर स्वास्थ्य परिक्षण गर्नु भयो । जब मेरो घरभित्रै डक्टर आउनु भयो । त्यो क्षण भगवान आए जस्तो लाग्यो । म बाँच्दै छु । मेरो आँखाले फेरी हिमाल देखिने छ । फेरी एक पटक श्रीमति र छोरिसँगै धरहरा चढेर काठमाडौं हेर्ने छु । यतिबेला स्वयम्भू र बौद्धनाथलाई दुई हात जोडेर प्रार्थना गर्ने छुकी संसारबाट कोरोना मुक्तहोस् । यसरी सम्झदा पनि मनमा यति धेरै उर्जा मिल्थ्योकी, कल्पना नै नगरौं ।
छोरी जेनिशा गुरुङलाई चिकित्सकले घरमा नै स्वाँब लिदै।
जीवन कै भावुक क्षण
जब म केही दिन होम आइसोलेसनमा थिए । त्यति बेला मेरो जीवन संगीनि इमाले हर समय ख्याल गरिएकी थिइन । एकदमै गारो समयमा थिए । त्यति बेला श्रीमतीले अत्यन्तै केयर गरिएको थियो । मलाई कोरोना लागेपनि श्रीमती र छोरीलाई नलागोस भनेर प्रार्थना गरिरहेको थिए । यसमा ६ वर्षकी छोरी जेनिशा र श्रीमती इमाकी कुनै दोष थिएन र छैन ।
यसपछि विस्तारै श्रीमतीमा पनि लक्षण देखियो । सास फेर्न गारो भयो । ज्वरो आयो । सोचेभन्दा ठिक उल्टो भयो । यसपछि डक्टरलाई घरमा बोलाए ।
जब डक्टरले घरमा आउनु भएर श्रीमती र छोरीको स्वाँब लिन थाल्यो । डक्टरको सेतो लुगा, उस्तै बाहिरी आवर देखेपछि छोरी डराइन । छोरीले स्वाव दिनै मानिन । यति बेला म जीवनकै भावुक क्षणमा आइपुगे । मेरो आँखाको परेलाहरु भिजिसकेको थियो । श्रीमति उस्तै भावुक भइन ।
मेरो हातमा अक्स मिटिर र ज्वरो मापन गर्ने थर्म मिटर थियो । यही मेरो प्राण जस्तो लाग्थ्यो । अक्सिजन ९२ भन्दा तला भयो भने हस्पिटल जानु पर्ने प्राण घडिको सुइ चलिरहेको थियो । र, छोरी र श्रीमतिको रिपोर्ट पोजेटिभ आयो । यसपछि म झन गलेँ । यसपछि कस्ले कस्को केयर गर्ने ? जबकी औषधी खानाको लागि पानी तताउने हिम्मत थिएन ।
गाउँमा बुवा र भाईलाई आफु कोरोना संक्रमित भएको खबर गरेको थिए । तर, यस्तो समय भावुक भन्दा पनि आत्माविश्वास चाहिने रहेछ । जब हामी दुवै जना संक्रमित भयौं । यसपछि छोरीको चिन्ता बढ्न थाल्यो । कोरोनाभन्दा पनि छोरीको चिन्ताले सताउन थाल्यो । श्रीमति उस्तै चिन्तामा थिइन ।
उस्तै छटपटि भयो । एकदमै भावुक भएको दिन हो । मेरै कारणले श्रीमति र छोरीलाई असह्य पिडा भयो । छोरीलाई कुनै ‘भवितव्य’ हुन्छ की भन्ने मनमा संन्त्रास फैलियो ।
श्रीमती र मेरो मुटु भनेकै ‘छोरी जेनिशा’ हो । यसकारण कयौंपटक भगवानसँग छोरीका लागि प्रार्थना गथ्र्ये । अहिले त्यो दिन झलझली सम्झि रहेको छु ।
लाग्थ्यो, हामी कतै परिवार नै मर्दैनौं ।(शरिरका रौहरु काडा झै उठ्थ्यो)
म छिटै भावुक हुने मान्छे हुँ !
हस्पिटल भर्ना हुनु पर्यो भन्ने नभएको होइन । हस्पिटल भर्ना हुनु भनेको घर नफर्किनु भन्ने सोचे । विडम्वना यस्तो नहुनु पर्ने तर, भइरहेको छ । यसकारण पनि होम आइसोलेसनले नै म र मेरो परिवार बचाउने मन मन्दिर सोचेँ ।
मन छुने समाचार
टेलिभिजन हेरेँ । अक्सिजन नपाएर मृत्यु भएको समाचार र भिडियो । नजिकको साथी, छिमेकी, आफन्त, एकदमै प्रिय लाग्ने मान्छे कोरोनाको कारण मृत्यु भन्ने जस्ता खबरले तर्साउने उस्तै थियो ।
प्रत्येक अनुहारमा दुःख छचल्किएको थियो । मैले श्रीमतिलाई भने,‘तिमीले मेरो चिन्ता नगर । म पनि चिन्ता गर्दिन । आफु आफै जसरी हुन्छ बच्नु र बाँच्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो ।
छोरी जेनिशाले बाहिर ढोकामा उभिएर सोधिन,‘ड्याडी तपाईलाई कोरोना भाइरस लागेको हो ?
अब कति दिनमा ठिक हुन्छ ?
ड्याडी तपाईलाई ठिक भएको हो ?
म मा उत्तर दिने कुनै शब्द थिएन । यस्तो अवस्थामा मेरो आँखामा आँशुभन्दा अरु कुनै उत्तर थिएन । श्रीमती पनि संक्रमित भएपछि भान्छामा जाने कोही भएन । कसैलाई बोलाउने समय पनि थिएन । हामीले आफै आफैले आ–आफ्नो ढंगले कोरोना जित्ने प्रण गरिरहेका थियौं ।
कोरोना नलागेसम्म केही होइन लागेपछि मृत्यु उपहार हुने छ । मृत्युसँग लडाइ गरेर विजयी भयो भने मानव जीवनको अर्को इतिहास स्वर्ण अक्षरले लेखेन्छि । कोरोना नलागेसम्म केही होइन लागेपछि बाचिन्छ वा बाचिन्न भन्न सकिन्न ।
बोल्न सजिलो छ । यथार्थमा गारो छ । यसकारण मृत्यु रोज्नेकी आफ्नो लागि आफै सतर्क हुने । यसकारण कोरोनालाई ख्याल ख्याल नबनाऔं । जबकी अहिले पुशपतिमा दाहसंस्कारका लागि लाइनछन् ।
अहिले हामी कोरोनाबाट मुक्त भइसकेका छौं । मसहित मेरो परिवारको रिपोर्ट नेगेटिभ आइसकेको छ । यद्यपी कोरोना जीतेर विगतको लयमा फर्किहाल्ने समय भने छैन । किनकी कोरोनाले मेरो परिवारलाई छोडेपनि नेपाललाई छोडेको छैन । यसकारण अझै केही समय घरमा नै बस्ने छु ।
कोरोना जितेपछि श्रीमती इमा र छोरीको साथमा पल
कोरोना कहरकै बीचमा गरिरहेका योगाभ्यास, एक्सरसाइज निरन्नतर गरिरहेको छु । अब आँतिएर, अतालिएर होइन होसियारीका साथ दैनिकी चलाउनु छ । म एक प्रतिनिधि पात्र हुँ । यसले सदैव र सबैका लागि केही न केही नयाँ सन्देश दिने छ ।
कोरोनाको औषधि छैन । आत्माबल दरो बनाएर शक्तिवद्र्धक खानपिन खाएर योगा गरेर जीत्नुपर्छ । जब कोरोनाको शिकार भइन्छ । त्येति बेला परिवार सम्झनु हुने छ । भगावन रुपी आमा बुवा ।
तपाईलाई सरकारले सोध्ने छैन । सरकारले हस्पिटल लैजाने छैन । सरकारले घरभित्र अक्सिजन ल्याउने छैन । सरकारले फोन गरेर तपाईलाई कस्तो छ भनेर सोध्ने छैन । यसकारण तपाई आफै सचेत नागरिक भएर कोरोनाबाट बचौं ।
सरकारले बिर्सीयो पर्यटन क्षेत्र
पर्यटन अर्थतन्त्रको अर्को उद्योग हो । जस्ले नेपालमा डलर भित्र्याउँछ । अनि व्यवसायीले रोजगार सृजना गर्छ । सरकारले व्यवसायीलाई कर उठाउँछ । अनि पर्यटन व्यवसायी र मजदुरलाई आपत पर्दा सरकारले बिर्सन्छ । यो तितो सत्य हो ।
मलाई यो अवस्थामा हौसला, प्रेरणा माया सदभाव र न्योनो उर्जा दिनुहुने मेरो परिवार, डक्टर, शुभेच्छुक, आफन्त, मेरो टिम प्रति नमन गर्न चाहान्छु । धन्यवाद !
डिस्कभरी वल्ड ट्रेकिङका सञ्चालक हुन्,पल गुरुङ । अस्ट्रेलियामा लामो समय बसेका गुरुङ दुई दशकदेखि नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा क्रियाशिल रहेका छन् ।
#Paul_Gurung. #Founder #CEO #Discovery_World_Trekking.